Bogga Ciyaaraha, 04 October 2017
Arbaco 4 October 2017
Barcelona oo Ka Gadoodsan Dowladda Spain
Barcelona, ayaa ku biireysa gadood sameyn ka dhan ah dowladda Spain, taas oo ku aaddan tallaabooyinkii ay dowladdu kaga jawaabtay intii ay socotey codeyntii madax bannaanida Catalonia.
Layvin Kurzawa oo Laga Saaray Liiska Xulka Faransiisk
Difaaca Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa, ayaa laga saaray liiska xulka dalka Faransiiska kulamada ay Faransiiska la dheeli doonaan xulalka dalka Bulgaria iyo Belarus, is reeb reebka koobka adduunka.
Chelsea oo Ku raad Joogta Alex Sandro
Kadib marki ay ku hungowday xagaagi hore helitaanka daafaca dadabka bidix ee kooxda Juventus Alex Sandro, ayey Chelsea hadda diyaar la tahay in ay mar kale dalab u dirto.
Morata oo Muddo Maqnaanaya
Weeraryahanka koxda Chelsea Alvaro Morata ayaa lagu wadaa inuu ka maqnaado garoomada wax ka badan 5 todobaad kadib marki uu dhaawac kasoo gaaray muruqaha cajirka.
Ozil oo Lala Xiriiriyay Inter
Kooxda Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la sheegayaa in ay isu diyaarineyso dalab xoogan oo ay bisha Jannaayo u diri doonto laacibka khadka dhexe ee kooxda Arsenal iyo xulka Jarmalka Mesut Ozil.
Todobaadkaan waxaa iyo kan xiga waxaa laga nasa doonaa horyaalada kubadda cakta ee Yurub iyo waliba kuwa kale ee aduunyada kale, taasi badalkeeda waxay kubadda cakta caalamka ku mashquuli doontaa isreeb reebka koobka aduunka ee 2018-ka.
Milan oo La Xiriirtay Tababarayaal
Kooxda AC Milan ayaa lagu soo warramayaa in ay bilowday baadi-goobka tababarihi beddeli lahaa macalinka hadda kooxda leyliya ee Vincenzo Montella.
Pique oo Ka Tagaya Xulka Qaranka
Laacibka difaaca uga ciyaara kooxda Barcelona Gerard Pique ayaa sheegay inuu ka fariisan doono ciyaaraha caalamiga ah ee xulka qaranka haddii taageerddi uu taageeray in gobolka uu kasoo jeedo ee Catalonia uu noqdo gobol ka madax bannaan Spain inteeda kale ay dhibaato ku noqoto xulka.
Chelsea-Man City Yaa Badin Doona?
Galabnimada Sabtida iyo habeenkeedaba waxaa dhici doona kulamo xiisa leh oo ka tirsan horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Ciyaarta isha lagu hayo ayaa ah tan fiidkii dhex mari doonta kooxaha Chelsea iyo Manchester City.
Shevchenko oo Ka Hadlay Kulanka Milan-Roma
Halyeeygii hore ee kooxda AC Milan Andriy Shevchenko ayaa sheegay in kulanka adag ee Axada dhexmari doona kooxaha Milan iyo Roma uu yahay kulan ka muuhimsan saddexda dhibcood ee loo tartamayo.
Montpellier oo taakeeysay Monaco
Kooxda Montpellier ayaa u diiday kooxda Monaco fursad ay ku qaban laheyd hogaanka horyaalka dalka France ee Leage 1, kadib marki ay ku celisay bareejo 1-1 ah.
Mourinho: Pogba Muddo Dheer Ayuu Maqnaanaya
Tababaraha Manchester United Jose Mourinho ayaa sheegey in Paul Pogba uu muddo dheer ciyaaraha ka maqnaan doona, sababtoo ah dhaawaca soo gaarey darteed.